नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन हुने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन – HostKhabar ::
नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन हुने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी
सुर्खेत : सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न नेपालमैं कारखाना खोल्ने गरी काम शुरु गरेको छ । रासायनिक मल सम्बन्धि समस्या हरेक वर्ष बल्जिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी काम शुरु गरेको हो ।
कृषि मल कारखाना स्थापनाको लागि आइतबार कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजनकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
कार्यदलले अध्यन अनुसन्धान गरी रिपोर्ट तयार गर्ने र सोही आधारमा मल अभावको समस्याबाट सधैका लागि छुटकार पाउन सरकारले कारखाना नै सञ्चालन गर्ने कृषी सचिव भारीले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिवहादुर के सीका अनुसार कार्यदलले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा भए गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूको रिपोर्ट अध्ययन गरेर व्यवहारिक रुपमै समाधानको उपाय खोजी गर्नेछ । उनले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम शुरु गरिएको बताए ।
कार्यदलले नेपालमा मै मल कारखाना स्थापनाको सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्नेछ । विशेष गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्डले तयार पारेको रिपोर्टको विस्तृत र गहन अध्ययन गर्ने प्रवक्ता डा. केसीले बताए ।
यस अघि २०७४ सालमा लगानी बोर्डले सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि गरेको अध्ययनले जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । कारखाना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीको पँुजीगत खर्च क्षमता कम्तीमा वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कारखाना निर्माण गर्न ७२ अर्ब ४० करोडदेखि एक खर्ब ४२ अर्बसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत्बाट सञ्चालन हुने कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने छ भने एक सय १५ मेगावाट विद्युतु आवश्यक पर्ने प्रविदेनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले विद्युत सस्तो भएको छ । यसले खर्च घटाउन केही सहयोग मिल्छ ।
तत्कालित लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा विद्युत् को प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ४८ हजार आठ सय २९ (प्रतिकिलो ४८.८० रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने प्रतिवेदन सुझाएको थियो । विद्युत्बाट उत्पादन गर्दा बजारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एक मेट्रिक टनमा ३० हजार (प्रतिकिलो ३०) रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।